‘Haqni intala kiyyaa osoo hin argamin waggaa tokko guute’ -Abbaa Haymaanot, Obba Badhaadhaa – Ayyaantuu Online
HomeAfaan Oromoo‘Haqni intala kiyyaa osoo hin argamin waggaa tokko guute’ -Abbaa Haymaanot, Obba Badhaadhaa
(BBC Afaan Oromoo) — Yunvarsiitii Finfinnee Xuqur Ambassaatti barattuu digrii lammaffaa kan turte Hayimaanot Badhaadhaa, Caamsaa 17, A L I bara 2012 erga mooraa Yunvarsiitichaa keessatti ajjeefamtee waggaa tokko guuteera.
Abbaan ishee Obbo Badhaadhaa Fayyisaa, rakkoo waggaa tokko kana keessa darban irratti BBC’tti dubbataniiru.
Jalqabumarraa akkaataan ajjeechaa Hayimaanot ajjeechaa sukaneessaa ta’uunsaa, jireenya maatii isaanii akka jeeqeefi waggaa darbe kana jireenyi maatii isaanii rakkoo guddaarra akka bu’e himan.
“Guyyaa ajjeefamuu isheerraa hanga har’aatti kunoo waggaa tokko. Waggaa tokko kana keessa guyyaama tokkoofuu boqonnaa hin arganne.”
“Halkanii guyyaa teenyee boonya. Maatiin kiyya niboo’a. Ani nan boo’a. Homaa hirriiba hin qabnu,” jedhan.
Waggaa tokko guutuus dhimma kana hordofuuf Adaamaa irraa Finfinneetti deddeebi’aa akka jiranis himu.
Adeemsa seeraa hanga ammaa jiru kan ilaalanis, namoota ajjeechaa isheetiin shakkamanii qabaman lama keessaa inni tokko ragaan qindaa’e waan irratti hin dhihaanneef Bitootessa 22, bara 2013 bilisaan gadhiifamuu himan.
Ajjeechaa isheetiin shakkamee kan jiru himatamaan tokkoffaan ammoo ragaa ittisaa dhiyeeffachuun, dhimmichi ammas mana murtiitti ilaalamaa jiraachuu Obbo Badhaadhaan dubbataniiru.
Namni shamarree Haayimaanoot ajjeesuun shakkame to’atame jedhe poolisiin
‘Mootummaan dhiiga mucayyoo kiyyaa haa naa barbaadu’
Sababa ajjeechaa intala isaaniin walqabateen rakkoo fayyaa ofii isaaniifi maatii isaaniirra gahe yoo himanis, “ani dura dhiibbaan dhiigaa kiyya xiqqaa ture amma sababa yeroo hunda aaruufi gadduuf narakkisaa jira.
Dhibeen sukkaaraas kanumaan walqabatee naqabee jira. Hojiin duraan hojjedhee maatii kiyya ittiin bulchus dhaabbateera,” jedhan.
Haqni Haayimaanot ji’oota keessatti murtii argata jennee yaadnus haala qabatamaa biyyattiinis keessa jirtuun obsumaan waggaa tokko eegneerra jedhu.
“Dhimmi micayyoo kiyyaa saffisaan akka murtii nuuf argatu barbaanna. Adeemsa seeraammoo hin beeknu. Waan rakkatanii waggaa tokko tursiisan isaantu beeka. Har’a kunoo wagga tokkoffaa ishee yaadachaa jirra,” jedhan.
Adeemsi seeraa saffisni dabalee murtoon barsiisaa ta’e irratti nuuf kennamee akka boqonnaa nuuf kennu barbaadna jechuunis gaafatu Obbo Badhaadhaan.
“Ani silaa micayyoo kiyya deebi’ee hin argadhu. Dhugaan ishii yoo ba’emmoo boqonnaan argadha. Maatiin kiyyas sammuun ni boqota. ”
“Dhimmi micayyoo tanaa seenaa nama hunda boochisedha. Uummata Itoophiyaa hundatu boo’e.
Kanaaf mootummaan dhugaa keenya akka nuuf argu ammas maqaa Waaqaatinan kadhadha,” jedhan.>
Haayimaanot eenyu turte?
Maatiin shamarree Haayimaanot Badhaadhaa magaalaa Adaamaa ganda Gooroo jiraatu.
Waggaa torba dura kan iddoo duraan jiraachaa turaniifi bakka dhaloota Hayimaanot magaalaa Matahaaraa irraa gara Adaamaa galan.
Abbaan Hayimaanoot Obbo Badhaadhaa Fayyisaa, intalli isaanii Yunivarsiitii Miizaan Teeppii irraa A.L.I bara 2009 muummee barnoota Kilinikaal Faarmasitiin qabxii olaanaan eebbifamtee barsiisummaan achumattii qacaramtee akka turte himu.
Boodas digirii lammaaffaa ishee hojjechuuf gara Xiqur Ambassaa seente.
‘’Barnoota ishee digirii lammaffaa bara 2010 eegalte bara darbe Waxabajjii keessa eebbifamuuf ‘research’ ishee deddeebi’aa hojjechaa turte,’’ jedhu Obboo Badhaadhaan.
Kutaa tokkoo kaastee hanga yunvarsitii galtuutti tokkoffaa bahaa turte jedhu cimina intala isaanii yoo ibsan.
Mucaan isaanii ‘’hospitaala beekamaa akka biyyaatti hin jira jedhamu’’ keessatti haala sukkaneessaa ta’een akkanaan ajjeefamuun ishee hedduu akka isaan gaddisiise himan.